ပါရာဂွေး မော်ဒယ် ရီကွယ်လ်မီး ၀တ်လစ်စားလစ် မပြေးသော်လည်း ဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံခဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » World News » ပါရာဂွေး မော်ဒယ် ရီကွယ်လ်မီး ၀တ်လစ်စားလစ် မပြေးသော်လည်း ဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံခဲ့
ပါရာဂွေး မော်ဒယ် ရီကွယ်လ်မီး ၀တ်လစ်စားလစ် မပြေးသော်လည်း ဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံခဲ့
Posted by True Faith on Jul 9, 2010 in World News | 39 comments
ပါရာဂွေး အသင်း၏ သမိုင်း တစ်လျှောက် ပထမဆုံး အကြိမ် ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲ ကွာတားဖိုင်နယ် အဆင့်သို့ တက်ရောက် နိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် ၀တ်လစ်စားလစ် ပြေးပြမည် ဆိုသည့် မော်ဒယ် ရီကွယ်လ်မီးသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဓာတ်ပုံဆရာ များနှင့် ၀တ်လစ်စားလစ် ဓာတ်ပုံများ အရိုက်ခံခဲ့ သည်ဟု သိရသည်။
အစောပိုင်းက စပိန် အသင်းအား ကျော်ဖြတ် နိုင်ပါက ၀တ်လစ်စားလစ် ပြေးကာ အောင်ပွဲ ခံမည်ဟု ဖွင့်ဟ ပြောကြားခဲ့သူ ရီကွယ်လ်မီး အနေဖြင့် စပိန်အား ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် အသင်း အနိုင်မရ ခဲ့သော်လည်း ကစားသမား များ၏ ကြိုးစား အားထုတ်မှု အတွက် ၎င်းအနေဖြင့် ၀တ်လစ်စားလစ် ပြေးဦးမည်ဟု ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
သို့သော် ယနေ့တိုင် အမှန်တကယ် ၀တ်လစ်စားလစ် ပြေးခြင်း မပြုခဲ့ဘဲ ပါရာဂွေး ကစားသမားများ၊ ပရိသတ်များနှင့် ကမ္ဘာ့ ဘောလုံး ပရိသတ်များ အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဓာတ်ပုံဆရာ များနှင့် ၀တ်လစ်စားလစ် ဓာတ်ပုံများ အရိုက် ခံခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့် အတူ နာမည်ကြီး လာသူ အသက် ၂၄နှစ် အရွယ် ပါရာဂွေး စတား ရီကွယ်လ်မီးက တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အောင်မြင်မှု ရရှိစေရန် အတွက် ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မည်ဟု ဆိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
(Soccer Myanmar အားကစားသတင်းဌာနမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။)
အဲ… တစ်မျိုးပါလား.. ဟဲဟဲ.. ပါရာဂွေးမော်ဒယ်က
ပါရာဂွေး အသင်းတွက် ..ဖလားမရ လဲ အိုးရတာပေါ့..
မိုက်တာတော့ တော်တော်မိုက်တယ်နော် အဟိ ။
ဟားဟား ရယ်ရတယ် … ပြောတော့အသင်းအတွက်ဆိုပြီး သူကိုယ်တိုင်နာမည်ကြီးချင်နေတာပါ ။
ဟုတ်တယ်နော် သူကိုတိုင်ကိုက တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ပြချင်နေလို့နေမှာပေါ့ အသင်းကို ဗန်းပြပြီးတော့
သူ့ကိုသူ ကမ္ဘာက သိအောင် လုပ်နေတာပါဗျာ အ၀တ်အစား မ၀တ်တာကလည်း အရှက်မရှိလို့ပါ သူ့ဟာကို ပြချင်လို့ပါ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကတော့ တော်တော်လေးတောင့်ပါတယ် မြန်မာမလေးများလည်း အတုယူသင့်ပါတယ် မော်ဒယ်ဆိုတာ ဒီလိုတောင့်တောင့်တင်းတင်းလေးဖြစ်သင့်ပါတယ်
သက်သက်မဲ့ နာမည်ကြီးအောင်လုပ်နေတာနဲ့တူတယ်နော်…. သူ့ခမျာ ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲ နာမည်ကြီးရတော့မှာမို့လို့နဲ့ တူတယ်နော်…..
အမျိုးသားရေးက နိုးကြားရုံတင်မကဘူး တခါတည်း ထောင်တက်သွားတာ အဟီး
ခန္ဓာငါးပါး…ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးလို့ပဲမြင်ကြပါ…..တရားသဘောနဲ့ရှု့ကြပေါ့ဗျာ…. ကျွန်တော်ကတော့ ကော်ပီကူးထားတယ်..တရားမှတ်မလို့ပါ….
တရားမှတ်ဖို့ ထက် ခန္ဓာရူဖို့ကောင်းတယ်
အောင်မြင်ကျော်ကြားဖို့ဆိုရင် ဘာမှလုပ်ဖို့ဝန်မလေးတော့ဘူး ထင်တယ်နော် .. ဟူးးးးးးးးးးးးးးး
မိုက်တယ်ဗျာ …. သရေတောင်ကျလာပြီ … ဘယ်သူတွေကော ဒီလိုမျိုးရိုက်သေးလား ….. စပိန်ကမော်ဒယ်တွေ လည်း ရိုက်နေလောက်ပြီထင်တယ်နော် ….
ကမ္ဘာ့ဖလားကို အာဂျင်တီးနားကိုပေးပြီးတော့ မာရာဒိုနာကို တုံးလုံးပြေးခိုင်းရမှာ …
အော် အားလုံးက ဒီပုံတွေပါပဲ ဘာများထူးချားနေလိုလဲ
တော်တော်အားရဖို့ကောင်းပါတယ်။ (သူ့ရဲ့နိုင်ငံအပေါ်ထားတဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုပြောတာပါ။)အဲဒါမျိုးကို အမြဲတမ်းအားပေးနေမယ်ဆိုတာ သူသိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲနော်။
အမျိုးသားရေး လှုံ့ဆော်မှုဆိုတာ ဒါကို ပြောတာ ထင်တယ်………………..
MNL အသင်းတွေနိုင်ရင်လည်း အဲလိုလုပ်ရင် ကောင်းမယ် ။
Ba Gyi Taw ပြောသလိုဖြစ်ပါစေ….အဟီး…
This is myanmar….
မော်ဒယ်လေးတွေ တွေ့ လို့ကတော့ ဒီပုံလောက်ကတော့ သနားတယ်…လုပ်ပြရမလားဖြစ်နေမယ်…သာစေရမယ်..
မြန်မာမော်ဒယ်မတွေများဒီသတင်းသိသွားသလားကွဲ့။တော်နေ အတုယူနေမှ အင်း……………………………………။
ပြောမရဘူး မြန်မာမော်ဒယ်လ်တွေလည်း နာမည်ကြီးအောင် အတင်းလုပ်ယူနေတဲ့ခေတ်လေ .. ဒါမျိုးအတုယူချင်နေမှာ … ဟားဟား
Luu Lay says:
အင်း …….. သူလည်း ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အသင်းကို တော်တော်ချစ်တာပဲ…….. ပါရာဂွေး အသင်း World cup မှာ ချိန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ရင် …….. ရီကွယ်လ်မီး လေးကို မြန်မာပြည်မှာလည်း တစ်ခေါက်ပြေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်မလို မှတ်ထားတာ………. အဟဲ
ဘာပဲပြောပြောလေ သူ့ကတိတော့ သူတည်ပါတယ် ပြေးမပြတာလေးကလွဲလို့ပေါ့
သင်ဇာဝင့်ကျော်၊ မိုးဟေကို၊၀ိုင်းစု၊ အစရှိသည့် နာမည်ကျော် မင်းသမီးများလည်း မြန်မာ့ဘောလုံးလောက တိုးတက်စေရန်အတွက် လာမည့် ဆီးဂိမ်းတွင် မြန်မာဘောလုံးအသင်း ဗိုလ်စွဲခဲ့ပါက …..။ အထက်ပါ ပါရာဂွေ မော်ဒယ်ကဲ့သို့ ကိုယ်လုံးတီးပြေးပြမည်ဟု သတင်းများရှိပါသည်။
(မှတ်ချက်) ဘောလုံးကွင်းတွင်း ပြေးပြမည် မဟုတ်။ အဖွဲချုပ် ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်၊ နာယကလား ဒုအုတ်လားမသိ ဦးတေဇ နှင့် အားကစားဝန်ကြီး၊အခြား တာဝန်ရှိသူ လူကြီးများရှေ့တွင်သာပြေးပြမည်ဖြစ်သည်။
ဒါလေးလဲ မဆိုးဘူး။အာ မှားလို့ကပါ ဟုတ်သေးဘူး